HomeWararka CiyaarahaBournemouth oo u Dhaqaaqaysa Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Middlesbrough Marcus Tavernier?
May 23, 2022 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga 0
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Middlesbrough Marcus Tavernier ayaa lagu soo waramayaa in la siin doono fursad uu ugu dhaqaaqo Bournemouth xagaagan.
23-sano jirkaan ayaa hadda ku riyaaqay mid ka mid ah xilli ciyaareedkiisii ​​ugu fiicnaa xirfadiisa ciyaareed, isagoo ka qeyb qaatay shan gool iyo shan caawin 44 kulan oo uu saftay horyaalka heerka labaad.
Inkasta oo si weyn loogu isticmaalay bartamaha garoonka, kala duwanaanshihiisa aagagga ballaaran ayaa ka caawiyay inuu noqdo qayb muhiim ah oo ka mid ah kooxda Chris Wilder ee Riverside Stadium.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay The Sun , Bournemouth oo dhawaan la soo dalacsiiyay ayaa diyaar u ah inay tijaabiso go’aanka Boro marka ay timaado ilaalinta mid ka mid ah hantidooda ugu qiimaha badan.
Tavernier ayaa kaliya hal sano uga harsan tahay qandaraaskiisa kooxda ka dhisan Waqooyi-Bari, isagoo si lama filaan ah uga tagaya iib macquul ah iyadoo Boro uu doonayo inuu ka fogaado inuu ciyaaryahan muhiim ah ku lumiyo beeca xorta ah.
Bournemouth ayaa laga yaabaa inay Tavernier u aragto bedelka la mid ah Todd Cantwell ka dib markii ay doorteen inaysan u dhaqaaqin doorkooda ah inay heshiis joogto ah kula soo wareegaan xiddiga Norwich City.